UWilliam Butler Yeats. Iminyaka eli-153 yembongi enkulu yaseIreland. 6 imibongo | Uncwadi lwangoku
William Butler Yeats yenye yeembongi ezinkulu ze Ireland kwaye namhlanje yeyakhe lokuzalwa. Wayekwangumbhali wemidlalo yeqonga kwaye engomnye wabona bameli babemeleyo ekuvuseleleni uncwadi lwaseIreland. Wayekwezopolitiko kwaye esebenza njenge-senator. Ngo-1923 wafumana i Ibhaso likaNobel kuNcwadi. Yiya 4 yemibongo yakhe yokubhiyozela isikhumbuzo sakhe.
2 6 imibongo
2.1 Xa umdala
2.2 Ngubani ophuphe ukuba ubuhle budlula njengephupha?
2.3 Uyabukhumbula ubuhle obulibalekileyo
2.4 Uthando lokuqala
2.5 Nika intanda yakho iivesi ezimbalwa
2.6 Iwayini ingena emlonyeni
Uzalelwe ngaphakathi Dublin, xa wayefunda intetho yakhe yokwamkelwa kukaNobel eRoyal Swedish Academy Yeats wathi uza kwenza njalo Isibhengezo sobuzwe baseIreland kunye nenkululeko yenkcubeko yaseIreland. Kwaye kukuba i-halo eyimfihlakalo eyayijikeleze lo mbhali yayinento yokwenza nomdla wakhe kunye nendumiso eyenze i Iintsomi ze-epic kunye ne-celtic lomhlaba wabo.
Ngapha koko wayenonxibelelwano ne isotericism yexesha kwaye wayeyinxalenye yomyalelo oyimfihlo The Golden Dawn, nangona kamva wayishiya. Yasekwa Itheyibhile yeAbbey kunye Ithiyetha yesizwe yaseIreland, awayeyalathisa ebomini bakhe, ephefumlelwe ngamasiko amaCelt kunye namabali abantu bakudala.
van 6 yemibongo yakhe ukumkhumbula okanye ukumbonisa kubantu abangaziwayo emsebenzini wakhe: Xa umdala, Ngubani ophuphe ukuba ubuhle budlula njengephupha?, Uyabukhumbula ubuhle obulibalekileyo Uthando lokuqala, Nika intanda yakho iivesi ezimbalwa y Iwayini ingena emlonyeni.
Xa umdala kwaye ungwevu kwaye udiniwe
kwaye ukunqwala ngomlilo thatha le ncwadi,
kwaye ufunde kancinci, uphupha ngamehlo athambileyo
Amehlo akho akhe abenawo, kunye nezithunzi zawo ezinzulu;
bangaphi abathandayo amaxesha akho obabalo oluvuyisayo,
kwaye bathande ubuhle bakho ngothando lobuxoki okanye lokwenene;
kodwa indoda yathanda umphefumlo womhambi kuwe,
kwaye wazithanda iintsizi zobuso bakho obuguqukayo.
Kwaye ungqiyame ngokukhanya kweenkuni,
uyakrokra, ulusizi kancinci, ukubaleka kanjani uthando,
indlela edada ngayo phezu kweentaba,
wabufihla ubuso bakhe phakathi kwenkitha yeenkwenkwezi.
Ngubani ophuphe ukuba ubuhle budlula njengephupha?
Kule milomo ebomvu, ngayo yonke ikratshi labo elidiniweyo,
lusizi sele lukhona, kungabikho nto inokumelwa kwangaphambili,
UTroy usishiyile ngesibane somngcwabo nobundlobongela,
kwaye oonyana baka Usna basishiyile.
Siyahamba, kwaye umhlaba oxakekileyo uhamba nathi
Phakathi kwemiphefumlo yabantu, abathi ndlelantle kwaye bayincame indawo yabo
njengamanzi amhlophe kugqatso lwabo lomkhenkce;
Ngaphantsi kweenkwenkwezi ezidlulayo, amagwebu esibhakabhakeni,
qhubeka uphile obu buso bodwa.
Guqa phantsi, zingelosi, kwindawo yakho yokuhlala emnyama:
Ngaphambi kokuba ubekho kwaye ngaphambi kokuba nayiphi na intliziyo ibethe,
Unikelwe kwaye unobubele wema ngakwitrone yakhe;
Ubuhle benza umhlaba waba yingca
ukuze azibeke iinyawo zakhe ezibhadulayo.
Uyabukhumbula ubuhle obulibalekileyo
Ngokukungqonga ezingalweni zam,
Ndibambelele entliziyweni yam obu buhle
kudala wasuka emhlabeni:
ndibeke izithsaba ezaphoswa ngookumkani
Kwimithombo engumoya, imikhosi ebalekayo;
amabali othando olukwe ngemisonto yesilika
ngabafazi abaphuphayo, kumalaphu
Iiroses zamaxesha alahlekileyo,
ukuba amanenekazi aluke iinwele zawo;
Iinyibiba ezibandayo zemvula ezaziphethwe ziintombi
ngokusebenzisa iipaseji ezingcwele ezimnyama,
apho kunyuka khona inkungu yesiqhumiso
kwaye nguThixo kuphela ocinga
okoko isifuba esimthubi, isandla esilibazisekileyo,
beza kuthi bevela kwamanye amazwe ubunzima kunye nobuthongo.
Kwaye xa uncwina phakathi kokumanga
Ndiva Buhle omhlophe naye encwina
yeyure xa yonke into
Kodwa idangatye kwilangatye kunye neenzonzobila enzonzobileni,
kunye netrone etroneni enesiqingatha emaphupheni,
bebeka amakrele abo emadolweni esinyithi,
Ngokudabukisayo bakhulela kwiimfihlakalo ezinkulu zodwa.
Nangona yayondliwe, njengenyanga ejikelezayo,
ngenxa yokubulawa kosana oluhle,
wahamba kancinci, wabomvu krwe kancinci,
Ndaza ndema endleleni,
ndide ndacinga ukuba ngumzimba wakhe
yayihlala intliziyo yomntu ephilayo.
Kodwa kuba isandla sam siyichukumisile
wafumana intliziyo yelitye,
Ndizamile izinto ezininzi
kwaye akukho namnye kubo osebenzayo,
ukusukela esiba ligeza
isandla esihamba enyangeni.
Wancuma kwaye wandiguqula,
ndithetha ndedwa, ndibabaza ndedwa,
Xa inyanga izula
Nika intanda yakho iivesi ezimbalwa
Qinisa iinwele zakho ngentambo yegolide,
kwaye uthathe ezo zi-braids ezilahlekileyo.
Ndicele intliziyo yam ukuba yenze ezi ndinyana zingalunganga:
Wayesebenza kuzo yonke imihla
isakhiwo ubuhle buhlungu
ngentsalela yeemfazwe ezisuka kwamanye amaxesha.
Ngokuphakamisa iperile esandleni sakho,
Songela iinwele zakho ezinde kwaye uncwina,
Iintliziyo zamadoda zibetha zitshise;
kunye nogwebu njengekhandlela kwintlabathi engacacanga
kunye neenkwenkwezi ezijikeleza isibhakabhaka ngombethe,
baphila ukukhanyisa iinyawo zakho kuphela.
Iwayini ingena emlonyeni
Uthando lungena emehlweni;
Yiyo yonke into esiyaziyo ngokwenene
Ngaphambi kokuguga nokufa.
Ngale ndlela ndizisa iglasi emlonyeni wam,
Kwaye ndikujongile, ndincwine.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » UWilliam Butler Yeats. Iminyaka eli-153 yembongi enkulu yaseIreland. 6 imibongo
UMiguel de Urbión sitsho
Uthando lungena emathunjini
ngamaza abizwa ngokuba ziimvakalelo
Kukho amehlo angaboniyo kwaye angalahlekiswa
xa uthando lufika lumnandi nomoya.
Phendula kuMiguel de Urbión
Ababhali abangaphumelelanga ngembasa kaNobel yoNcwadi